Izigodi – iAfrika
Umehluko phakathi kwamasiko, usikompilo, kanye nomkhuba
Kujwayelekile ukuthi uma sikhuluma siphambanise phakathi kwezinto ezingu mkhuba owenziwayo, amasiko kanye nosikompilo lwabantu. Akusilona icala ukuphambanisa lamagama kepha kuhle ukwazi ukuthi asetshenziswa uma kwenziwani futhi kukhulunywa ngani. Njengabantu abakhule ngesintu, kunezinto ezingamasiko eziyinsila yethu thina Zulu esizenzayo, mase kuba khona usikompilo lwemizi kanye nezigodi ezahlukene bese kuphetha ngemikhuba eyenziwayo endaweni, esigodini okanye ekhaya noma … Read more
Tags Amakhosi, Imikhuba, Izigodi, Usikompilo
Isigodi yindawo eyakheleke phansi maphakathi nezindawo eziphakeme, bese iba yinhle ngokuhloba kwemvelo. Uma uphuphe uhamba kuyona leyo ndawo, lokho kusho okubi. Lolu hlobo lwephupho lubika ukugula, okungaba ngokuqondene nawe noma kuqondene nomunye wabantu abasondelene nawe kakhulu.
Tags Imvelo, Izigodi